Halis Ka Soo Fool Leh Markab Taagan Xebta Yemen | Gaaroodi News
Halis Ka Soo Fool Leh Markab Taagan Xebta Yemen
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa u fadhiisanaya si uu uga xaajoodo halista ka soo fool leh markab saliidda qaada oo daxalaystay oo taagan meel ka baxsan xeebaha Yemen ee Badda Cas.
Markabkaas oo la yidhaa FSO Safer ayaa sida in ka badan hal milyan oo foosto oo saliid caydhiin ah waxaanay khubaradu ka dardaar werinayaan masiibo ku habsan karta deegaanka badda hadii marbkaasi burburo.
Markabkan ayaan wax dayac tir ah helin tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka ba’an ee sokeeye ee Yemen shan sano ka hor.
Fallaagada Xuutiyiinta ayaa Axaddii aqbalay in ay koox ka socota Qaramada Midoobay u ogolaadaan in ay fuulaan markabkaas laakiin waxa muran ka taaganyahay sida loo iibinayo saliidda saaran.
FSO Safer wuxuu shaqaynayey 45 sano waxaanu barroosinka dhigtay meel qiyaastii 60km u jirta dekadda Xudayday ee woqooyiga dalkaas ku taal oo ay fallaagadu gacanta ku hayaan.
Biyo ayaa durba galay qolka matoorka markabka, waxaanay arintaasi sii kordhinaysaa halista ah inuu markabku dego ama laba u kala go’o.
Waxa jira xal lagu furdaami karo laakiin Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in isku daygaasi keeni karo masiibo.
Ka sokow in ay baabiin karto nolosha kalluunka badda ku jira hadii saliiddu ku daadato, waxa kale oo ay sidoo kale khasaare weyn gayeysiinaysaa dadka noloshoodu ku tiirsantahay kalluumaysiga.
Urur u ololeeya daryeelka deegaanka Yemen oo la yidhaa Xulm Akhdar, ayaa ku qiyaasay tirada dadka ku shaqo beelaya hadii masiibadaasi dhacdo in ay ka badan tahay 126 000 oo qof.
Bishii hore ayaa digniin uu soo saaray ururku waxa uu ku sheegay “Yemen waxay ku qaadan doontaa muddo dheer in ay nadiifiso dikhowga badda. Degaanka Badda Cas waxay ku qaadan doontaa 30 sano inuu ka soo kabto halista ba’an ee ku soo fool leh hadii saliiddaasi ku daadato”.
Sidoo kale hadii saliidaasi ku daadato badda waxay sidoo kale xayiri doontaa mid ka mid ah marin biyoodada dunida kuwa kugu mashquulka badan waxaanay saamayn doontaa in badeecado gaadhaan dekadda Xudayda oo ah halka keliya ee loo mariyo gargaarka laba meeloodow saddex dadka reer Yemen.
Dabayaaqadii bishii June, ayaa xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay walaac mug leh ka muujiyeen waxa ay ku tilmaameen “halista isa soo taraysa ee ka imanaysa markabka SFO Safer oo ku burburi kara badda isla markaana keeni kara masiibo deegaan iyo mid dhaqaaleba oo gaadha Yemen iyo dalalka ollogeeda ah”. Xulm Akhdar
Waxay ugu baaqeen Xuutiyiinta in ay “si degdeg ah fursad aan shuruudi ku xidhnayn u siiyaan khubrao farsamo oo ka socota Qaramada Midoobay in ay soo qiimeeyaan xaaladda markabka oo ay eegaan sida ay suurto gal u tahay in si degdeg ah loo kabo markabkaas oo ay soo bandhigaan sida ugu habboon ee markabkaa saliidda looga rogi karo”.
Qaramada Midoobay waxay sheegtay in ay ka arinsanayso sida loo iibin karo saliidda markabkaa saaran oo lagu qiyaasay 40 milyan oo doolar ee loogu qaybin karo dakhligaas Xuutiyiinta iyo xukuumdda Yemen ee ay xufulada Sucuudigu hogaamiyo ee dalalka Carbeed ahi taageeraan.
Haseyeeshee, Xuutiyiinta ayaa ku adkaystay in la aqbalo in ay iyagu saliidda markabkaa saaran xaraashaan.
Qiimaha saliidda markabka saaran ayaa haatan taagan kala badh intii uu ahaa intii aan sicirka saliidda dunidu dhulka gelin sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters. Walow uu xataa kaba sii hoosayn karo marka la eego tayada saliidda markaba saarani sida ay tahay haatan.
Dagaalka sokeeye ee Yemen ayaa waxa la sheegaa in ay ku dhinteen 100,000 oo qof sidoo kalena uu sababay waxa ay Qaramada Midoobay ku sheegtay masiibadii aadamenimo ee ugu xumayd dunida.
Qiyaastii 80% dadka dalkaas oo ka badan 24 milyan oo qof ayaa u baahan gargaar iyo ilaalo la siiyo, waxaana la qiyaasay in laba milyan oo caruur ah ay hayso nafaqo darro ba’ani.
Dalku waxa uu sidoo kale la daalaa dhacayaa fayraska korona.
Lise Grande, oo ah isku duwaha gargaarka Qaramada Midoobay ee Yemen, ayaa Isniintii yidhi “Yemen culayska haatan haysta in ka badan ma qaadi karto. Ma hayno dhaqaale nagu filan oo adeegyadii caafimaadka iyo biyuhu waa gabaabsi. Macaluul ayaa mar labaad dalka soo food saartay dadka dalka oo dhanna fayraska korona ayaa faro baas ku haya”.